Midori Nchọgharị: N'ihi na ọ bụghị ihe niile bụ Firefox na Chromium | Site na Linux
Midori Nchọgharị: Maka na ọ bụghị ihe niile bụ Firefox na Chromium
M na-abụ onye ọrụ Firefox (na echere m na m ga-anọ ogologo oge), ọ bụ ezie na m na-ejikwa site n'oge ruo n'oge opera y chromium.
Mana anyi na echefu ihe ndi ozo dika Midori, obere ihe nchọgharị nke na-enweta ndị na-eso ụzọ maka uru ya, na sịkwa ihe ijuanya. Onwe m nwere ike iru ya naanị site na okwu 2: Na-egbu egbu y Ìhè.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ na m na-ekwubiga okwu ókè ma jiri ya Nyocha Debian, ha ga-emepe ọnụ na pịnye:
i puru ihu ihe m na-ekwu.
Ugbu a, m na-ede post a site na Midori 0.4.1 amaja m ikwu, na m na-achọpụta ya ọtụtụ ihe ngwa ngwa karịa Opera-Na-esote 12, Chromium 14 y Firefox 7.0.1.
Ọ dị mma, ọ bụghịkwa panacea. O nwere ndọtị ole na ole na mgbe ụfọdụ enwere obere nkọwa na omume anaghị amasị m ntakịrị. The interface bụ nnọọ yiri na nke chromium, ọ bụ ezie na nku anya na-adị oke ike (ma eleghị anya ọ bụ isiokwu gtk), ma ọ dịghị ihe na-enweghị ike idi. Na mgbe ị na-arụ ọrụ na ihe oyiyi na dashboard WordPress, hà opera edidi.
Mana ihe a niile nwere ike ịbụ onye ziri ezi site na otu ngwa ọ na-ebu ibe weebụ. N'ezie m na-echeta n'oge na-adịbeghị anya na a Nnwale Acid, ọ dị mma karịa ihe nchọgharị ndị ọzọ. Nakwa iji obere ihe oriri.
Midori gụnyere ọtụtụ engines ọchụchọ, menu jikọrọ ọnụ yana Chrome, na enwere ike ịhazi ya n'ụzọ dị mfe, na-emegharị omume ya ka e wee kpuchie ya dị ka ihe nchọgharị ndị ọzọ. Ọ bara uru ịnwale ma tinye ya dị ka ihe ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Midori Nchọgharị: Maka na ọ bụghị ihe niile bụ Firefox na Chromium
Midori emeela ka m nwee nsogbu mgbe m nwere PC nwayọ, na slitaz distro ha gụnyere ya dị ka ihe nchọgharị ndabara n'ihi ịdị ọkụ ya. Ọ bụrụ na m cheta n'ụzọ ziri ezi, ọ nwere ngwa mgbakwunye adblock na nhọrọ ndị ọzọ bụ isi nke na-eme ka ha nwekwuo obere ọrụ. Ọ dị mma ịrara oghere nye midori ebe a na desdelinux, ekele! 🙂
Anọ m na-ahụ na enwere ngwa mgbakwunye nke ọrụ ya bụ inye ndị ọrụ ohere ịtinye ngwa mgbakwunye ha, ma ọ bụ mgbakwunye ndị ọzọ (echere m). Nke ahụ bụ otu n'ime ike nke Firefox, Chrome na ọbụlagodi Opera, nke matara na oge na-adịghị anya.
Naanị m wụnye Midori na Wheezy mana mgbe m chọrọ itinye ibe edokọbara nchọgharị ahụ mechiri, ị nweghị nsogbu a?
Kpọmkwem. Otu ihe ahụ na-eme m 🙁
Midori abụghị ihe nchọgharị kwụsiri ike 100%, ọ bụghị nsogbu gị, kama ọ bụ ihe nchọgharị
Kpọmkwem. Nke a bụ njehie nke na-enye m:
iwu @ debian dijo
N'ezie, ana m eji Midori ugbu a, amaghị m ihe nchọgharị weebụ ga-achọpụta m, mana o doro anya na distro m na-eji anaghị achọpụta m.
Midori nke bịara na Debian nwere nsogbu edozila mgbe m chịkọtara nsụgharị ọhụrụ site na weebụsaịtị ya, ana m akwado ya.
Ọzọkwa na Japanese Midori pụtara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ,
Zaghachi nye lawliet @ debian
Gnome 3.2.1: Naanị ngwugwu / modul na-edozi